(၂၀၂၁ – ဇွန်လ)မှာ စာချုပ်ကုန်ရင် မက်ဆီ ဘယ်လဲ၊ ဆက်နေမလား…? – MySport Myanmar
(၂၀၂၁ – ဇွန်လ)မှာ စာချုပ်ကုန်ရင် မက်ဆီ ဘယ်လဲ၊ ဆက်နေမလား…?
မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာ အားကစား ဒါရိုက်တာ အဲရစ် အဘီဒယ်လ်နဲ့ စကားများခဲ့ကြတာကြောင့် လာမယ့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့မှာ အသင်းကနေ ထွက်သွားနိုင်တယ် ဆိုတာ တကယ် ဖြစ်နိုင်လာ။ မက်ဆီအနေနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ အလွတ်ပြောင်းရွေ့ကြေးနဲ့ ထွက်သွားတော့မှာလာ။ ဒါမှမဟုတ် ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် ထပ်တိုးပြီး အသင်းမှာပဲ ဆက်နေမှာလာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေမှာတော့ မက်ဆီအနေနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ စာချုပ် ထပ်တိုးဖွယ် မရှိတော့ဘဲ (၂၀၂၁) ခုနှစ်မှာ စာချုပ်ကုန်ရင် အသင်း ပြောင်းနိုင်တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
မက်ဆီဟာ လက်ရှိ စာချုပ်မှာ အသင်းကနေ ထွက်သွားနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ခု ပါဝင်နေတာကြောင့် စပိန် ပြင်ပ အသင်းတစ်သင်းကို ပြောင်းသွားနိုင်ချေရှိပြီး မန်စီးတီးအသင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မန်စီးတီး နည်းပြ ပက် ဂွါဒီယိုလာဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို နည်းပြခဲ့စဉ်က မက်ဆီရဲ့ ခြေစွမ်း နဲ့ ကစားဟန်ကို ကြေညက်ခဲ့ပြီးသား ဖြစ်ပြီး မန်စီးတီးအသင်းက မက်ဆီကို ခေါ်ယူချင်ခဲ့ပါတယ်။ နည်းပြ ပက် ဂွါဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ မက်ဆီကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေလျက် ရှိပြီး မက်ဆီအနေနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းက ထွက်ပြီး မန်စီးတီးအသင်းကို ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
မက်ဆီဟာ (၂၀၂၁) ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ စာချုပ် ကုန်မှာ ဖြစ်ပြီး စာချုပ်ထဲမှာ အသင်းက ထွက်နိုင်ပြီး အသင်းက ထွက်ချင်ရင် ကြိုတင် (၁) လ အသိပေးရမှာပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မက်ဆီဟာ လက်ရှိအချိန်အထိ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် မတိုးသေးဘဲ ပြီးခဲ့တဲ့ လက ဒါရိုက်တာ အဘီဒယ်လ်နဲ့ အချင်းများခဲ့တာကြောင့် တင်းမာမှုတွေ ရှိနေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် ထပ်မတိုးဘူးဆိုရင် အလွတ်ပြောင်းရွေ့ကြေးနဲ့ ထွက်သွားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်အသင်းမဆို သူ့ကို ခေါ်ယူဖို့ ချဉ်းကပ်မှာ သေချာပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ အားကစား ဒါရိုက်တာ အဘီဒယ်လ်က ကစားသမားတွေဟာ မကြိုးစားကြဘူးလို့ ပြောခဲ့တာကြောင့် မက်ဆီက ဒေါသထွက် ပြန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး ဆက်ဆံရေး တင်းမာသွားခဲ့တဲ့ အဆုံးသတ်က ဘာဖြစ်မလဲ.. မက်ဆီ ဘယ်လဲ.. ဆက်နေမလား.
MySport Myanmar2020-03-21T21:31:41+06:30March 21st, 2020|Football, La Liga, News|